2015 | အ င်္လ ကာ ည
During Water Festival (Thingyan)- (12 April to 18 ...
“ ချစ်သူ အတွက် Valentine “
1:46 PM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
2) မှောင်မိုက်တဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ
ငါ့ ကြယ်လေးကို အရောင်မှိန်စေမယ့်
4) တစ်ခြား ဘာမှမလိုဘူး
မသိမိလိုက်​​သော......အချိန်​များ © ကျူရှင်​အားကိုးပြီး အတန်းပိုင်​ဆရာမ ပို့​ပေးတဲ့ အတန်းသစ်​မှာ .... ငါ​ပျော်​နေမိတယ်​။ © အပိုင်​ရတဲ့​မေးခွန်းကို ​အောင်​မှတ်​​ရွေးကျက်​တဲ့ ​အောင်​မြင်​မှုအတွက်​ ..... ငါ ဂုဏ်​​ယူမိတယ်​။ © Pratical အခန်းမှာ စာထိုင်​ကူးပြီး လက်​​တွေ့ကိရိယာ​တွေကို အလှထိုင်​ကြည့်​​နေရတာ ငါ ​ကျေနပ်​​နေမိတယ်​။ © Tutorial ​ခေါင်းစဉ်​​အောက်​မှာ နာရီဝက်​​လောက်​ ဖတ်​စာအုပ်​က​နေ ကူးတဲ့အရသာကို ငါ ချိုမြိန်​မိတယ်​။ © ဘာမှန်းမသိ...... သုံးနှစ်​သုံးမိုး အချိန်​​ပေးလိုက်​တာ ဘွဲ့တစ်​ခု​တော့ အဖတ်​တင်​တာ​ပေါ့။ © ဘွဲ့ရ ပညာမတတ်​ဘ၀​တွေ ဘွဲ့ရ အလုပ်​လက်​မဲ့ ဘ၀​တွေ ဘာလို့ ... ငါတို့ရဲ့အ​ကောင်းဆုံး ဥာဏ်​ဖွံ့ဖြိုးချိန်​အတွက်​ အာမခံချက်​မရှိတာလဲ....? © ​သြော်​.... ပညာ​ရေးတဲ့ အပြစ်​တင်​ဖို့ စဉ်းစား​တော့ မသိမိလိုက်​တဲ့ အချိန်​​တွေမှာ ငါတို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာ။ © ​နောင်​တကို မုန်းရင်​​တော့ ဘာစနစ်​ဖြစ်​ဖြစ်​ လူငယ်​​တွေ ကြိုးစားကြပါ တိုင်းပြည်​အနာဂတ်​ဟာ ငါတို့လက်​ထဲမှာ​လေ ငါတို့.... ပျင်း​နေမယ်​ဆိုရင်​​တော့​ ​နောက်​မျိုးဆက်​​တွေ အတွက်​ ​တွေးကြည့်​ကြ​ပေါ့။ (အလင်္ကာည)
12:53 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
During Water Festival (Thingyan)- (12 April to 18 April, 2015)
12:41 AM | Labels: မမေ့အပ်သည်များ
“ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မမေ့မလျော့ခြင်းသည်
သေခြင်းကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း
- ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မေ့လျော့ခြင်းသည်
ပူပန်ဆင်းရဲ အဖန်တလဲလဲ သေရခြင်း၏
- ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မမေ့လျော့သော သူတို့သည်
မသေရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြမည်ဖြစ်၍
- ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မေ့လျော့သောသူတို့သည်
အသက်ရှင်လျက် ရှိကြသော်လည်း အဖန်တလဲလဲ
သေကြရဦးမည်ဖြစ်၍ သေသောသူနှင့် တူကုန်၏။ ”
Heedfulness is the path to the Deathless.*
The heedless are as if dead already. ( Dhammapada)
10:49 PM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
အာဒံက ဧ၀ ကို
ရိုမီယိုက ဂျူးလီယက် ကို
တစ်ခြမ်းက “Lo” တစ်ခြမ်းက “Ve”
“Love” လိုပီ အချစ်
February (13) . ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့
February (14) Happy Valentine’s Day
10:16 PM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
Valentine လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်တဲ့နေ့
“Feb (14)” မှာ ဖြူစင်တယ်။
Valentine နေ့ရဲ့ နေ၀င်ချိန်
Valentine ပါ ချစ်သူ။